Home Wararka Kiisaska dhimashada & kuwa cusub oo kordhay, xilli la musuqmaasuqay kaalmadii Covid-19
Kiisaska dhimashada & kuwa cusub oo kordhay, xilli la musuqmaasuqay kaalmadii Covid-19
Somalia 286 8
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada, Fowziya Abiikar Nuur oo kamid ah guddiga kahor tagga COVID-19, ayaa sidoo kale sheegtay in xanuunka ay ka bogsoodeen laba ruux oo kale.Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa maanta xaqiijisay inay kordheen dadka u geeriyooday cudurka Coronavirus iyo kiisaska cusub ee dalka laga diiwaan geliyey.
Wasaaradda ayaa sheegtay in laba qof oo kamid ah dadkii laga helay cudurka COVID-19 ay geeriyoodeen, 41 xaaladood oo cusubna ay soo kordheen kadib baaritaanno lagu sameeyay dad badan oo lagu arkay astaamaha Cudurka.
Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in deegannada dowlad gobaleedka Galmudug laga diiwaan geliyay xaaladdii ugu horeysay ee COVD-19 ah.
Sida ay wasaaradda ay sheegtay, 40-ka kale ee bukaannada cusub ah waxay ku suganyihiin magaalada Muqdisho. 31 kamid ah bukaannda cusud waa rag, 10-nna waa haween.
“Tirada guud ee xaaladaha COVID-19 ayaa noqotay 328 qof, bukaannada bogsooday guud ahaan waa sideed, sidoo kale bukaannada dalka ugu geeriyooday guud ahaan waxay noqdeen 16,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa dhammaan Soomaalida ugu baaqday inay qaataan talooyinka caafimaad ee qaybta ka ah dadaallada lagu xakameynayo cudurka COVID-19.
Previous articleDowlada Sacuudiga oo Soomaaliya ka qaaday xayiraada xoolaha oo saarneed mudo 6 sano ah
Next articleXafiiska Madaxweynaha Soomaaliya oo wakiilka QM kacodsaday fududeen shir ay isugu imaanayaan Dowlad Goboleedyada iyo DFS
Sheekh Shariif “Diyaaradda ay soo rideen Itoobiya waxay halis iyo xadgudub...